ထင်ယောင်ထင်မမှား grammar များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ထင်ယောင်ထင်မမှား grammar များ
ထင်ယောင်ထင်မမှား grammar များ
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Mar 6, 2013 in Community & Society, How To.. | 14 comments
ဒီနေ့ ရာဟူးမှာ အင်္ဂလိပ် ဂရမ်မာနဲ့ဆိုင်လို့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဆောင်းပါးတွေ့လို့ ရွာသူသမီးလေးများအကျိုး အလို့ငှာ ကြိုးစားပမ်းစား ဘာသာပြန် လိုက်ပါတယ်။ မှားတယ် ထင်နေဂျတဲ့ အမှားမဟုတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ဝါကျတည်ဆောက်ပုံ ၇ခုနဲ့ စာလုံးအချို့ပါ။ ရွာသားတွေက ဖ လေးလုံးသမား အများစုဖြစ်တာမို့ စကားထည့် မပြောတော့ဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာမဟုတ်လို့ ဘာသာပြန် အမှားအယွင်းများစွာရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါ အတိအကျ သိလိုလျင် ကော်ပီကတ် မူရင်းအင်္ဂလိပ်စာကိုသာ ဖတ်ပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း စေတနှာ အရင်းခံလျက် သမီးရဲ့ဦး ကြောင်ကြီး :cool:
To နဲ့ verb အကြား adverb မခြားရသည် နိုင်တီးဂွမ်တီးခေတ် သဒ္ဒါစည်းကမ်းပါ။ ဟိုတုံးက လက်တင်စာသည် အင်္ဂလိပ်စာ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်ပြီး သူ့မှာ အဲသလို infinitve ခွဲထုတ်ပစ်ဖို့ ခွင့်မပြုထားဘူး။ အင်္ဂလိပ်သည် လက်တင်စာ မဟုတ်လို့ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံ ပေါ်ထွန်းလာတဲ့ အရေးအသားမှာ ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာများဖြစ်တဲ့ ဟမ်းမင်းဝေးနဲ့ ဂျင်းန် ရိုဒန်ဘယ်ရီတို့ရဲ့ စာများတွေ့နိုင်ပါတယ်။ from Hemingway (“But I would come back to where it pleases me to live; to really live”) to Gene Rodenberry (“to boldly go where no man has gone before”). It’s okay to boldly do it.
ဝါကျတကြောင်းကို preposition (မှ၊ တွင်၊ သို့) နဲ့ အဆုံးမသတ်ရဆိုတာ ၁၆၇၂ခုနှစ် ကဗျာဆရာ ဂျွန်ဒရိုင်ဒန် ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ သူလည်း လက်တင်ဘာသာ သဒ္ဒါစည်းကမ်းကို ရောယောင် စံထားခဲ့ပုံရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်စာမှာ အဲလိုအခြေခံမူ မရှိလို့ သူ့ကို လစ်လျူရှုပြီး ရသမြောက်အောင် ရေးသွားကြတဲ့ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာများစွာ ရှိပါတယ်။ (Jane Austen: “Fanny could with difficulty give the smile that was asked for.” Robert Frost: “The University is one most people have heard of.” James Joyce: “He had enough money to settle down on.”) ဝါကျကို preposition မပိတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ to whom, to whichလို ကို့ယို့ကားယားစာကြောင်း ဖြစ်တတ်တယ်။ ဝင်စတန်ချာချီရဲ့ ရုံးစာတခုမှာ အဲဒီအမှား တွေ့ရတယ်။ (” Winston Churchill allegedly wrote: “This is the type of arrant pedantry up with which I will not put.” )
စကားပြောရာမှာ preposition နဲ့ဆုံးရင် အားပျော့တာကြောင့် ကိစ္စအထူးမရှိရင် ဝါကျကို ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်နားသင့်တယ်။ သူ့ကိုပေါ့ ငါပိုက်ဆံပေးလိုက်တာ အစား ငါသူ့ကို ပိုက်ဆံ ပေးလိုက်တယ် ပြန်ပြင်ရေးရင် လိုရင်းပိုရောက်ပါတယ်။ “He’s the person I gave the money to” isn’t as good as “I gave him the money.”
Defining or restrictive clausesမှာ which မသုံးရ၊ that ပဲသုံးရမယ်ဆိုတာ အမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ “The United States is one of the countries which that failed to ratify the Kyoto Protocol.” တမင်ဖန်တီး သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပြီး အဲလိုပဲသုံးဖို့ ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မတွေ့ရပါ။ တည်းဖြတ်ထားတဲ့စာသား ၇၅%မှာ which ကိုပဲ သုံးပါတယ်။ တရားခံက ကမ္ဘာကျော် ဘာသာဗေဒ ကျမ်းပြုဆရာဂျီး ဖောင်လာရဲ့ ၁၉၂၆ခုနှစ်ထုတ် Modern English Usage စာအုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူက အဲဒီထုံးစံ လိုက်နာခဲ့ရင် အများကြီး ရှင်းလင်းလွယ်ကူ စေလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့တာနဲ့ပဲ လူတွေက တရားသေ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ကြတာပါ။
တရားဝင် ရုံးသုံးစာလိုမျိုးကလွဲရင် ဝါကျကို and, but နဲ့စတင်တာ ပြသနာ မရှိပါဘူး။ ရယ်ဖို့ကောင်းတာ အဲလို မလုပ်ရဆိုတဲ့ စည်းကမ်း ဘယ်မှာ၊ ဘယ်သူ ထုတ်ပြန်ခဲ့သလဲ တဦးတယောက်မှ မသိကြတာပါ။ လူတွေမှာ အလယ်တန်း သဒ္ဒါစည်းကမ်း ခေါင်းထဲစွဲနေကြလို့ အဲလိုရေးရင် မှားတယ် ထင်နေကြပုံပဲ။ conjucation ကို commaနဲ့ စတဲ့ အဖွင့်ဝါကျတွေ တဖြည်းဖြည်း ရေပန်းစားလာပါပြီ။ ဥပမာ- “But, we got there too late for the early-bird special.
သွယ်ဝိုက်ပြောတဲ့ စာရေးပုံကို ကန့်ကွက်တဲ့အခါ သမတဟောင်း ဂျော့ရ်ှဘုရ်ှရဲ့ ၁၉၈၆ခုနှစ် အီရန် ကွန်ထရာ အရှုပ်တော်ပုံ မိန့်ခွန်းမှာ “ အမှား ဖြစ်ခဲ့တယ်” လို့ပြောခဲ့တာကို ထောက်ပြကြတယ်။ ပြသနာက ဘယ်သူ အမှားလုပ်တာလဲ? စာကြောင်းဝါကျ တည်ဆောက်ပုံမှာ မရှင်းမရှင်း လုပ်ထားလို့ပါ။ သွယ်ဝိုက်ပုံစံ စာစီတဲ့အခါ အဓိပ္ပါယ် ထိန်ချန်မှု၊ စာလုံးဖောင်းပွမှုတွေ ဖြစ်စေတတ်လို့ ဂရုစိုက် သုံးရမယ်။ သူ့ကိုယ်၌တွင် အမှားမရှိဘူး။ ဝါကျမှာ ပြုလုပ်သူ ရှာမတွေ့ရင်၊ ပြုသူနဲ့ အပြုခံရသူ အရေးပါပုံ တူညီနေရင် သွယ်ဝိုက်အပြော ပုံစံမှန်ပါတယ်။ ၁၉၆၃ နိုဝင်ဘာ ၂၃ရက် နယူးယောက်တိုမ်းစ် အဖွင့်စာကြောင်းမှာ “President John Fitzgerald Kennedy was shot and killed by an assassin today.” လို့ရေးထားတယ်၊ အဲဒါကို စာရေးသူက တိုက်ရိုက်လေသံနဲ့ အတင်းဖြစ်ညှစ်ရေးရင် အဓိပါယ် ပျက်ဆီးသွားပါလိမ့်မည်။
6. Don’t neglect to use singular verbs
ဒေတာသည် လက်တင်လို ဒေတန်စာလုံးရဲ့ အများကိန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ကာလ ကြာတော့ အင်္ဂလိပ်စာမှာ ရေ၊ ငွေကြေးလို collective နာမ်စားဖြစ်သွားပြီး singular verb သုံးရပါတော့တယ်။ အောက်စ်စဖို့ အဘိဓာန် ကိုးကားချက်တိုင်းမှာ အဲဒီverb အသုံးပြုထားပါတယ်။ “Inconsistent data sometimes producesacorrect result,” ဒါကြောင့် plural verb သုံးဖို့တိုက်တွန်းရင် အပိုဆာဒါးလို့ မှတ်ထင်ကုန်ပါပြီ။ မီဒီယာ စာလုံးသည် လမ်းကြောင်းပေါင်းစုံမှ သတင်းအချက်အလက်များကို လူအဖွဲ့အစည်းသို့ပို့ပေးခြင်း အဓိပါယ်ထွက်ပါတယ်။ လက်တင်စာလုံး မီဒီယမ် plural ဖြစ်ပေမဲ့ ဟိုးအရင်ထဲက singular အဖြစ်သာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
အုပ်စု group or အခိုင်အဖီး bunch တို့မှာ of တွဲသုံးတဲ့အခါ အလားတူ ပြသနာ ကြုံပါတယ်။ ဥပမာ – ဘော်ဒါ တအုပ်လာနေတယ် “A bunch of my friends is/are coming over.” မှာ အချို့က singular verb “is” ကို သုံးကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီနေရာမှာ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါက ပုံသေသတ်မှတ် မထားဘူး၊ plural verb “are” ကိုလည်း သုံးနိုင်တယ်။ အကြံပေးချင်တာ singular နဲ့ plural ရွေးတဲ့အခါ ဝါကျမှာ ဘယ်အရာကို ဇောင်းပေးပြောချင်လဲ မူတည်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ – သူငယ်ချင်းအုပ်ကို ညွှန်းချင်တာလား၊ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောချင်တာလား။
7. Don’t use words to mean what they’ve been widely used to mean for 50 years or more
အောက်စဖို့ အဘိဓာန်ကို တချက်ကြည့်ယုံနဲ့ ဘယ်တော့မှ မပြောင်းတာ စာလုံးအဓိပ္ပါယ်များ ပြောင်းလဲမှုသာ ရှိပါတယ်။ အချိန်တော့လိုတယ်၊ စာလုံးအဓိပ္ပါယ် အသစ်ကို သူများထက်ဦးအောင် အစောပိုင်း သုံးသူတွေ နားလည်မှုအလွဲနဲ့ အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်း အန္တရယ် ကြုံတွေ့တတ်တယ်။ အချိန်တခုထက်ပိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ဟောင်းကို ဖက်တွယ်ဆဲ ဆိုရင်တော့ အချီးနှီး အကျိုးမဲ့ပါ။ အဓိပါယ်အသစ် စာလုံးများကို အောက်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဆင်ကြီး ဘင်တီး အင်ဖြီး ဝန်ဂျီး
like to mean “such as”
liable to to mean “likely to”
hopefully to mean “I hope that”
over to mean “more than”
since to mean “because”
while to mean “although”
momentarily to mean “inamoment”
the lion’s share to mean “the majority”
verbal to mean “oral”
I could care less to mean “I couldn’t care less” And if you haveaproblem with that, I could care less. အဓိပ္ပါယ် ဆိုလိုရင်း ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေမှာဆိုးလို့ အင်တာနက်မှာ ရှင်းလင်းချက် ရှာပေးထားတာပါ။ Think about it: if you could care less, that means you care some. The original already drips sarcasm, so it’s pointless to argue that the newer version is “ironic. public.wsu.edu/~brians/errors/care.html
By Ben Yagoda | The Week –
When it comes to the English language, I’m not an anything-goes kind of guy. If I were, I wouldn’t have writtenabook called How to Not Write Bad: The Most Common Writing Errors and the Best Ways to Avoid Them. It’s just that I hate to see people waste their time hunting down so-called mistakes that really aren’t mistakes at all. So consider thisapublic-service announcement in the wake of Monday’s National Grammar Day. Here are seven rules you really (really!) don’t have to worry about following.
(It has become popular recently to follow sentence-opening conjunctions withacomma, for example, “But, we got there too late for the early-bird special.” That is indeed wrong. No comma.)
Etymologically, data is the plural of the Latin datum. But from the time it first appeared in English, it has been treated asacollective noun (such as water or money), and collective nouns take singular verbs. Every single citation in The Oxford English Dictionary (OED) pairs data with suchaverb, starting with, “Inconsistent data sometimes producesacorrect result,” from an 1820 edition of the Edinburgh New Philosophical Journal. Thus, insisting on the data are… is pretentious and unnecessary. Media, meaning the various means by which information is disseminated inasociety, appeared later — 1923, according to the OED. Although it’s plural of the Latin medium, it too was treated from the start asasingular. The media are… is an unfortunate recent affectation.
A similar issue arises whenaword such as group or bunch is followed by the word of, thenaplural. For example: “A bunch of my friends is/are coming over.” Some sticklers insist on is, because group is singular. But this is an area where English grammar is flexible, and are is acceptable as well. My advice is to choose the singular or plural based on whether you’re emphasizing the collection or the individuals. In the above example, I would go with are. Saying A bunch of my friends is coming over sounds as stuffy as your nostrils in the middle ofaparticularly bad cold.
An instant’s glance at the OED confirms that the one thing about words that never changes is that their meanings always change. The process takes time, and to be an early adopter ofanew meaning means putting yourself at risk of both incomprehension and abuse. However, atacertain point, clinging to old definitions isasuperstitious waste of time and thought. Here’salist of words and expressions whose new meanings, though still scorned by some sticklers, are completely acceptable. (If it puzzles you that there is any objection to some of these, or to find out the original meaning, Google the word or phrase. You will findalively debate, to say the least.)
အရင် ကူးသွားပါ ၏။
ကြောင်ကြောင် အတီရေးထားတာကို အတီဖတ်သွားပါဒယ်…
အပေါ်က မခိုင်ဇာနဲ့ မမ wow လိုပါပဲ :harr:
ဘာ ဖလေးလုံး သမားတွေရမှာလဲ
အဲဒီ ဖလေးလုံး အဖွဲ့ ထဲမှာ ခင်ဗျားကြီးက ဂိုဏ်းချုပ် ဆိုတာ
ကျုပ်ကတော့အိုပြီဆိုတော့ကျုပ် ကလေးတွေအတွက်ကူးထားပြီ
ခက်တာက ဒီကကျောင်းမှာ သွားသုံးရင် ဆရာမတွေက ပြဿနာလုပ်မယ်ထင်တယ် ။
မှားမှားမှန်မှန် ငါပြောသလိုလုပ် ဆိုတာလေ…
အူးကြောင်တောင် အတည်တွေ ရေးနေပြီ ဧကန္တ ဆေးလှုပ်သောက်လို့ထင်တယ် အခြေနေတိုးတက်လာတယ်
ကိုရင်ကြောင်ကြီးမှ.. မြန်မာစာလုံးအသစ်များနဲ့.. သဒ္ဒါသစ်များ`..ရေးသားထီထွင်ပေးစေလိုကြောင်း..
သဒတ်မတာ..စတ်မတာဘူး..တဲ့.. လေ..။ါ်kwi:
အူးကြောင် ကာစီနိုဝိုင်းတွေမှာ ရှူံးတာတွေများလို့
အူးကြောင်း ပြန်ပြင်ပြောလိုက်ပါ.. ဒီက ဖလေးလုံးသမားတွေမဟုတ်ပါဘူး
ကျုပ်က အစကတည်းက ဂရမ်မာတွေဘာတွေ သိပ်ဂရုစိုက်တာမဟုတ်ဘူး…။
အဲဒီတော့ ရေးတာမှန်ရင် စတန်းဒတ် အင်းဂလိရှ်
ရေးတာမှားတော့လဲ မော်ဒန် အင်းဂလိရှ် ပေါ့…။
ကျုပ်ဖတ်ဖူးတဲ့ ၀ထ္တုတော်တော်များများမှာလဲ သဒ္ဒါမှန်တယ်မထင်ပါဘူး။
Formal writing တွေအတွက်တော့ grammar မှန်ဖို့လိုတယ် ထင်ပါတယ်။
ကဗျာမှာလည်း ဂလန်မာ လိုက်စရာ မလိုဘူးလို့
အိုက်ဒါ ဟုတ်ဒလားဂျ …
ဥမပါ …. Nhar Buu Gyi Daddy Kyaung Main Ma Ma Ya Tay Paung ….
ဆယ်တန်းတုန်းက အင်္ဂလိပ်စာဆရာပြောနေကျစကားတစ်ခု သတိရမိတယ် …
English has no rule except one rule this is no rule.
ကျုပ်လည်း ဦးပါလိုပဲ ဂရမ်မာတွေဘာတွေ သိပ်ဂရုစိုက်တာမဟုတ်ဘူး (မတတ်လို့..) :harr:
ဒီတစ်ခါ အတည်ရေးထားသော ဦးကြောင်၏ပို့စ်အား
ဖတ်ရှု မှတ်သားကာ သွားပါကြောင်း